Deegaanka | Portal │ Hans Kottke
Wac Rita: “Poetry Slam”(Gabayga) About Micro BALAASTIKADA …
August 31, 2018 | Uu Kottke | Tags: Gabayga, Mikroplastik, ilaalinta, Poetry Slam, Wac Rita, Deegaanka.
Badda waxaa ka buuxa qashin – Cadka 2014 ee HD …
Waxaan nahay kooxda heysata Koobka Adduunka ee dib u warshadaynta. Si kastaba ha ahaatee, badda woqooyi buuxa qashinka oo caag ah. The bacaha jir, Dhalooyinka iyo shimbiraha dilay Baakadaha iyo kalluunka. Dhamaadka darafyadiisa caag ah, dhulka galay qayb la arki karin, in aannu cunto. Sida qashinka galo badda?
July 9th, 2015 | Uu Kottke | Tags: More, Qashinka, Caaga, Deegaanka, Wasakhda.
Categories: 2015, Current, General, Jeeda, Video | Comments: No Comments
Cad – Qoob ka ciyaarka ah ee nafta…
Waxaan ku fadhiya oo saaka sida maalin walba hore ee aan computer. Shaqadan hadda waa mid ka mid ah aan Tagesstruktur lashed. Waxaan ka emails iyo jawaab gaaban ee Dib-u-mails. Waxaan daawanayay stats aan homepage iyo my blog iyo indhaha ku hayaa inaan ku soo booqda dad badan oo caalami ah. Laga soo bilaabo labada geesood fog ee adduunka eegto gaadiidka inaan blog - afka maaha wax dhibaato ah, maxaa yeelay, waxaan kuu dhisay turjumaan ah oo ku saabsan bogga. Waxaan u arkaa wax soo jiidasho leh, articles aan Carabi, si ay u eegaan Ruush ama Shiinaha, characters la fahmi karin oo xiiso leh, oo u qarineysaan fikirradayda. Waana mid ka, waxaan u eegno amusin aan xisaab iyo soosaaray, ma sababta oo ah qadarka laakiin halkii ay dareento, in aan tuug qaar ka mid ah ayaa isla ekeyn siinayaa helaan. Markaasay, Waa in mid ka mid taxaddar wakhtiyadii dhammaadkoodii.
Waxaan ku fadhiisan aan qol mugdi ah, weli waa mid aad u aroor hore, iyo inaan u fiirsado, intii aan Dhageeyso barnaamijka raadiyaha ka Maraykanka ah ee asalka ah, taasi oo ka barnaamijyada kala duwan, wararka caalamiga ah ee Wabiyaalkii,. Halkan video ah oo ka soo Bariga Fog, waxaa warbixinta radio ka Germany ama xataa article wargeyska ka soo USA ah. Xulashada waa sidaas oo waaweyn, Waxaan mar walba oo kaliya iskaan maqaaladaan, ugu badnaan Kooban Fulinta, fiirsan dibna go'aan ka, haddii aan doonayo in aan akhriyo maqaalkan. Ka dib markii in mar hore mar kale soo socota go'aan - maqaalka xiiso leh oo ku filan, Si aad u dhigay Twitter? In isku dhafka ah ee wararka iyo xidhiidhada blog aniga ii gaar ah posts waxaan ka dhigi aan socodka Twitter. By habkan, articles dadkaygii waxaa loo revalued gelitaanka - waxay soo socda si lama filaan ah joojiyay in articles ee wargeysyada keentay. Xoogaa qiyaasay ...
Laakiin waxaan dareemayaa wanaag oo ku saabsan. Waxaan halkan fadhiya qolka fadhiga aan, eegaya monitor sidii daaqad xagga dunida. Ma dareemo cidlo. Saas ma aha ee gurguurta igu dareento, in qayb ka mid ah oo dhan ka weyn noqon.
Tani waa adduunka ee isgaarsiinta, macluumaadka waxashnimo ah qubanayo, bararto sii kordheysa dhowr sano. Waxay ka kooban tahay raso weyn oo characters qashinka iyo sanamyadii, oo waa tartan, heli sabiib ka. Laakiin mid ka mid ah uu leeyahay habab kala duwan oo habboon oo daadkii ka compressing, markaas shancosbitaal waa wax ay ku dhisanto. Oo anigu waxaan cabbo ku margan mana weyn waxaa ka mid ah maalin walba. Saaxiibbaday way of anigaa, Sidaas daraaddeed ayaan horay arrin xukunka cabbay. Qaar ka mid ah horay qabatinka? Faraj ee balwadda waa khasaaraha faraha ka, mar dambe ayaan u hagaajin noloshayda laakiin Muqaadaraadka Narcotic ii go'aamiyo. Laakiin qoor ee isgaarsiinta waxaan weli ma noqon. Aniga qudhaydu waxaan kala saari karaa oo la sameeyo iyada oo muddo dheer ku furmo suuqa dunida.
Waxaan ahay qof niyad-, ayaa sidoo kale si joogta ah u la dhibtoonayo cabsi uu. Oo xaaladan nolosha la hubin waxaan u baahan dayactirka, dhisme, dhexaadin ay joogto qaar ka mid ah ammaanka. Oo kanu waa qaab-dhismeedka maalin aan, oo aan lagu daro aan xidhiidhka la taaban karin.
Waxaan ku qori articles in my blog - haa waayo, kii run ahaantii? Waxaan daweeyo mawduucyada, Kuwa aniga i guurin fikirkaygu, oo wuxuu u soo diri ee ah nirvana isgaarsiinta magaabo. Iyada oo hawshan, waxaan ahay ma keliya dheer fikirro la, laakiin fikirradayda waa qayb ka mid ah-oo dhan adduunka. Waxaan qayb ka mid ah tuulada caalami ahay oo waan khiyaanayn karo, si ay u sameeyaan aan sameeyo tuulada la. Haddii aan jawaab-celin ah si kastaba ha ahaatee, tani waa niyad mustaqbalka fog. Laakiin tixgelin ka mas`uulka ahaa istaatistikada my blog la show, Hello - weli waxaa jira qof, oo daneyneysa in fikirradayda. Nice - waxaa ii soo baxdo in dareen ah ku qanacsan.
Markaasay, waqti dheer noloshayda niyad si lama filaan ah uu helo dareen. Oo anna waxaan sidoo kale keligaa ma ku fadhiisan afar darbi aan ka badan laakiin xidhiidhka ku saabsan barnaamijyada ee duantahay la shisheeyayaal qaaradood fog (oo weliba bilaash ah!).
Laakiin gebi ahaanba saaxiibtinimada waxay ku wadaan inay sii. Waxaan aanay ku socon Ghana badan jidadka, arki xero suuqa iyo dad badan oo kulaylka dareento this, qayladii maqlaan ama yeeshaan dareen ah ee Ghana. No, Waxaan xiriir la leedahay dadka ka soo Ghana oo arkay laakiin aan Braunschweiger Standard-madax. Marka tan la eegayo ayaan gebi ahaanba kaliya karaa tago qolka fadhiga ku furmo suuqa Monitor ee dunida. Waa kuwee i xusuusineysaa, aan computer leeyahay fursado hal abuur ah oo ku dhow xad lahayn. Waxaan ka dhigi kartaa fikradaha kala gadisan ee foomka ugu kala duwan, es SEI ee Form eines Videos, yar lagu qoslo, maqaal, podcast ah, ama xataa yar show TV (Videostreaming). Barnaamijyo badan oo aan waayo-aragnimo bixisaa aan
Mashiinka Inyar loolan cusub, taas waa in la buuxiyaa. Oo mid ka mid ah ayaa gaaray fulinta, kicisaa dareen ah ku qanacsan. Si kedis ah, khasaare ah ma rabo inaan, laakiin qayb firfircoon ee bulshada.
Short - Waxaan doonayaa inaan ku dareen farxadeed, oo waxay i siinaysaa aan computer, mar dambe ma ay samayn aan. Waxa uu sidoo kale waa muraayadda naftaydu. Haddii si xun ayaan ku quudisaan, Waxaan aad u hesho natiijooyinka faraxsaneyn. Oo weliba farxada iyo qanacsanaanta yihiin qiyamka, taas oo soo horeysay miisaanka la rabay inuu la jiro ragga.
Si kastaba ha ahaatee, adduunka dalwaddii aan computer aan noqdaa mid aad u yar. Adduunka Tani waa qayb ka mid ah miisaan weyn - laakiin dhammaantiin ma aha. Waxa kale oo aan bilaabay, in ay ku lug mar kale adduunka dhabta ah. Kaliya waxaa ayaan cunto shiidaa helay qori kartaa fikirka in tallaabooyin cadna. Xiriirka dadka kale, oo jir ahaan waa ii soo horjeeda, laakiin sidoo kale karti badan oo heerar cusub oo qiiro leh, oo raali galin lahayd mashiinka yara sinaba.
Sidaas daraaddeed waxaan horey u ahay lug sanado badan in walwalka koox is-caawisa iyo niyad-. Tan iyo markii aan ka heli dadka, fahamsanahay dhismeedka shakhsiyadda niyad iyo wixii aan dareemaan weli xiran xitaa muddo dheer ah ka dib. View A, Ugu Yeeray iyo mar hore waxaan dareemayaa naftayda - eray ama farta yar. Socodka ah ee dadka cusub ee imanaya si fudud ma siibo oo muddo ka isbeddel joogto ah waxaa nala jira oo dhan la arki karo. Wax walba iska guuro iyo waxba weli, hore u sheegay falsafo Greek Heraclitus wakhtiyadii hore – ma waxaad talaabo karo laba jeer webiga ka mid ah…
Laakiin qof kasta oo Banii'aadan waa qayb ka mid ah webiga oo horeba u qaadataa dadaal qaar ka mid ah, sidoo kale in aad la kulanto socodka this kac. Mid ka mid ah waxay u baahan tahay firaaqada ah, si ay u soo baxaan nolosha maalin kasta iyo in ay awoodaan si ay u eegaan il this joogto ah. Ma Jidka markan ismaandhaafka aan xiisaha, waxaa ku guleeysta ay dardar u gaar ah. Si la xiriira waa habka doonaya aqoon dheeraad ah. Tani waxaan u aqoonsanahay hawlaha halkii qasan qayb ka aragti ka duwan oo uu doonayo in uu hadda ogahay, ayaa keentay in gobol this waxa sababa. Sidaas aan hadda akhriska sannado badan oo buugaag ah oo ku saabsan taariikhda iyo fikirrada Dadka ka dib. Si tartiib ah u kacaya ka mosaics badan sawirka guud, ay daahfurnaanta igu weheliyo, ee nolol maalmeedka.
Our falsafada kooxda yar, tusiyo ah borofisar Marexaan falsafada, idinkaa iska xirto caawin. Laakiin ma keliya, waxyaha tirooyinka isbedel ku webiga waxay keentaa, waa nidaaminta dareenka aqoonta leh ka qaybgalayaasha kale, taasoo galay si qoto dheer oo muujinaya in ay saamayn. Man yahay ka dib markii dhan qabka bulshada iyo kaliya in sarrifka dadka kale, isagu waa u imanayaa inuu aayahooda run.
Waa maxay muhiim u ah nolosha? Mana Doonayo inaan ku aadan, hadda kor u uu Farta iyo in la qabto homily ah. Waxaan horey u soo baratay in aannu is-help group: tallaabooyinka ay tahay in nolol lagu qanco kalsooni ku qaba waxaan uun ka heli kartaa naftaada oo igu taal. Talo waa wanaagsan, laakiin waxaan go'aansan naftaada, Waan ku aqbali karaan ii. Wax oo keliya mid ka mid ah waa mid aad u muhiim ah: go'aankeyga!
Markaasay, Mid kasta wuxuu leeyahay si ay u go'aamiyaan, Si aad u qaadato mas'uuliyadda naftooda. Xitaa haddii aan "u baahan eraygan” Nacaybka, haddii ay taasi runtii ku lifaaqan. Iyada oo aan mas'uul ka nafteena, waxaan sidoo kale u qaadan karin mas'uuliyadda kasta oo kale. Kaliya aqbalo run ah sida lagama maarmaan ka dib waxaan sidoo kale ka heli xorriyadda, u istaagto kale. Laakiin tani mararka qaarkood waa wax sidaas u fudud.
Ha i siiyo tusaale: markii iigu ka cabsi bulshada waxaa, inay i kala fur, si kalsooni leh u dhaqmaan ama in la sameeyo xiriirada bulshada, ka dibna waxaan bilaabayaa in ay ku dhaqmaan. Sidaas ayaan ku dhawaaqay naftayda diyaar, ka qayb waab macluumaad ah, todobaadlaha ahaa dhisaa si toos ah bartamaha magaalada. Waxaan halkaas tago si ula kac ah in dadka kale in ay isku dayaan iyo, bulshada. Halkan waxaan jeclaan lahaa in ay ka qayb sida aan ahay, la waxyaalihii aan ka cabsaday, Duni iyo xirfadaha. Tani aqbalo oo aan is waa sheer khilaaf ah oo markii hore: tegaynaa cabsi iyo xaaladda aan dadka kale? Laakiin aan waayo-aragnimo ayaa igu qanciyay: by dhaqanka joogto ah, ka cabsi yar oo aan ammaan sii kordhaya. Markaasay, Waxaan ku guuleystaan ​​ka dib xoogaa waqti xitaa, in ay turjumaan xaalada dareenka dadka kale oo ay ka jawaabaan baahiyahooda (ugu yaraan qayb ka mid).
Tani habka dhaqanka presupposes, in aan diyaar u ahay u dhaqmaan, waxaan ahay diyaar, ku lug leh ficil. Sida kaliya ee si wax looga qabto dhibaatooyinka iyo aniga wuu ka adkaan karaan. Sida ku maahmaahda qurux badan: "Wax ku dhiiratay, waxba helay…” Mabda ', oo taasuna waa wax sal u ah therapy kasta habdhaqanka.
Waxaan marka hore aan dareen gaar ah oo masuul ka qaaday ii, oo aan aaminsanahay, sida aan ka bogsado, Waxaan boodi sidoo kale si degdeg ah u su'aasha ah ee masuuliyadda caalamka. Waxaan uun qayb ka mid ah oo dhan caalamiga ah ahay, qayb ka mid ah aadanaha oo aan farxad iyo sidoo kale barakaysan kuwa kale si dhow u la xiriira. Ugu dambayntii, fayo-qabka shaqsiga uu ku xiran yahay a dareen caalami ah oo caafimaad qaba mas'uuliyad ah oo dhan. Ma garan, in haatan ma aha oo kaliya ego aan xarunta dunida, laakiin kuwa tacsiyada wada raaxada ee kale ee.
Tusaalaha kor ku yaal iyadoo waab warbixinta ayaa sidoo kale i tusay, in i helay iyada oo tababar u damqasho siinayaa qanacsanaanta. Dareenka Taas macnaheedu waxa weeye farqiga noo dhexeeya in ay aqbalaan iyo in ay dulqaad. Laakiin in aysan wax "iyo gargaare syndrome" loogu tala galay – Waxaan maayo inaan aniga qudhaydu lumin halka caawinta. Waxaan ila joogi doonaa oo isku day, i si ay u muujiyaan midnimo. I saaran waan qaadan dhinaca kale in miyir ah, in qof kasta uu xaq u leeyahay in la is-gudashada iyo fayo-qabka. Waxaa kale oo ku saabsan dheelitirka oo ah baahida u gaarka ah dadka kale.
Marxaladani waxay sii firfircoon ii free, ii oggolaanaya, had iyo jeer in la furo ilaa dheeraad ah oo beero cusub oo waxqabad. Oo weliba in aannu is-help Group, waxaan la kulmi firfircoon mar kale - in aad marka hore koreen doon ah, waxaa intaa raaciyay ahaantiisa.
Intaa waxaa dheer in koox taageero daryeelka aan qaadi sidoo kale in xubnaha kale ee ku laayeen oo ka mid ah bulshada - dadka naafada ah, Kale, Aalkolo, maskaxda ka jiran. Deeqdani haatan ka fiirsado sida arrin dabcan ii.
Waa anshaxa cusub, Waxaan isku dayayaa in aan fuliyo ila: Waxaan rabaa inaan noqdo qof raxmad, diida wax dareen ah in dadka kale, qalbigay ka. Aan la aqoonsan yahay, baahida aan sidoo kale ku tiirsan oo dhinaca kale ah. Haddii aan la is tixgelin badbaadada bulsho dhulka aanay taasi suurtogal ahayn.
Waxaan fiiri GAIA (= Hooyo Earth) habeenkii (iyo sidoo kale maalinta), Layga qaaday oo hurdo ah ...
Adduunyo waa in koorsada taariikhiga ah ee burinaya ay, kaas oo mas'uul ka yahay inta badan nin, gaaray sameesanay. Sidii sanadihii hore, ma aha sii. Labada heer qaran iyo mid caalamiba, innagu waxaynu nahay at a “dhibic aan laga soo laaban” soo gaaray. Isu dheelitir la'aanta ka dhexeeya Taajirka iyo miskiinku ee macnaha guud ee qaranka iyo kuwa caalamiga ah ayaa la wareegay cabbir, taas oo aan la gelin karaa anshaxa aan kor lagu sharaxay sida waafaqsan. Dadka way ka badewedu bulshada iyo islana damac ah ishaysta grandfathering, Xasdi kasta oo kale ee maal. Qaybo badan oo ka mid ah shirkadaha ay leeyihiin, ay sabab u tahay qaab-dhismeedka lahaanshaha ma ay heli karaan khayraadka muhiimka ah. Haddii ay tahay khilaafka u dhexeeya waqooyi-koonfur horumariyo iyo in dalalka horumarinta ama xataa keliya Hartz IV qaataha iyaga iyo carruurtooda ka: burinaya ee qanacsanaanta baahida ay tahay - si ay u muuqataa - unsolvable.
Waxa intaa dheer in lahaanshaha oo ka mid ah qalabka iyo shaqada lug la xiriira Waa maxay waxan sidoo kale khilaaf waxbarashada iyo warbaahinta kale ee bulshada, qaabka wacyi in dadweynaha. Anigu waxaan ahay fikir ah, oo nin waluba waa inuu falsafo u gaar ah, laakiin aqoonta la gaadhi karo oo kaliya ee ilaa iyo haatan sida, iyo sidoo kale tababarka lagama maarmaanka ah, taas oo lagama maarmaan u ah geeddi-socodka lagu wacyi, muuqaalada. Oo arimahan adkaan hore awoodaha dhaqanka, oo ma galaan ah anshaxa cusub ee dareenka bulshada aadan. Waxay leeyihiin wax ay lumiso, xooggooda iyo hantidoodii.
Aan isku dayno, in-dayntooda ku dareen caalami ah oo masuuliyad ku miyir guud ee dadka caadiga! Falsafada A koritaanka xad lahayn darro in maanta iyo da '. Helitaanka shidaalka ku kooban yahay. Waa, si ay u horumariyaan teknoolajiyada cusub ee tamarta la cusboonaysiin karo iyadoo cadaadis sare, in masiibo cimilada tacaalaan weli ku Arzugnayna waxbay laga yaabaa. Waalli ah dheehan waano nuclear oo dhan khatarta ay Dadka waa in la joojiyo. Iyadoo qayb ka ah dareenka caalamiga ah ee masuuliyadda, waa in aanu "... daadkii iga daba" tanaasulno ee. Fikradaha cusub ee u baahan in la tixgeliyo in la wabtay maanta ka qaban. Yaa ku dhacaa wax dareen ah, oo qudhiisu waa dambi in mustaqbalka iyo carruurteenna carruurta dambiga. Daacadnimo ku saabsan xaaladda waa adinba.
Waxaa cad waa "in la” in lagu rakibaa xarunta of our miyir oo aan ahayn "Hayso”. Kaafinimada noqon doonaa lagama maarmaan ah buuxda mustaqbalka. Laakiin tani ma aha dheregsan yahay ee qaab-dhismeedka bulshada loogu tala galay. Halkan waxaa ah, si ay u dhawrto daryeelka qof kasta oo bulshada ku hay – in dareenka caadi wanaagsan – iyo in ay ka fogaadaan differentiations xad-dhaaf ah.
Man in shuuciyad soo maray sida dabiiciga ah goosgoos ah. On suuqa shaqada, waa in uu dhammayn Services, oo Yeela tartan kale. Duniduna waxay u muuqataa inuu ku hodgepodge ah ee alaabta, uu u bartaan kartaa guusha uu gaaray. Iyo isticmaalka tani u muuqataa inuu Good kaliya, waxa la jecel yahay. Laakiin isagu wuxuu ku qanacsanaanta run dhab ah halka aan helay. Waxa uu ku nool yahay ee isaga u gaar ah afarta derbi oo si dirqi ah u muuqataa banaanka diilinta – inkastoo telefishanka iyo Internetka. Ama warbaahinta kuwaas oo horay u qalabaysan macaamiisha ku leh mas'uuliyadda caalamka?
Warbixin ku saabsan xaaladda aadanaha oo aad ka heli in tacsida, laakiin waxa ka maqan waa nidaaminta miyir, ku lug dareenka, taasoo ugu danbeyn keenaysaa in tallaabo oo sidaas isbedelka. Waxaa muhiim ah in sidoo kale ay ka yimaadeen kala sidaas oo inta badan la xidhiidha aragtida mechanistic iyo random si aragti caalami ah - arkayso dhulka oo dhan. Ninkan ma aha Xukunka dhulka u taliyo, sida qaar ka mid ah waxay leeyihiin lahaa nama rumaynaysid injineerada hidde, laakiin nin waa qayb ka mid ah dabeecadda, sida ay u muuqato in qaabka dhulka.
Haddii aan u yeedho fikrado cusub ee hantiwadaagga ama mustaqbalka ama utopianism, waa run ahaantii schnurz. War fiican u ah anshaxa cusub ee caalamka fikrad kasta oo cusub in la xaliyo xaalada caalamiga ah waa macno leh oo wax tar leh. Si kastaba ha ahaatee muhim ah u boodboodi tayo leh ka fikrad inay tallaabo ka dibna waa sidoo kale. Waxaana rajeynayaa u dhaq-dhaqaaqa badan oo cusub, kuwaas oo diyaar u yihiin, dareen cusub oo caalami ah oo mas'uul ka ah in ku lug yeelato saaxadda siyaasadeed.
“Oggolow”, ayaa sheegay in dawacadii.
“Halkan aan qarsoodi ah.
Waxaad si fudud u qabsan kartaa:
kaliya waxa aad ka arki kartaa qalbigaaga.
Waa maxay lagama maarmaan ah waa la arki karin isha. "
Halkan waa article sida PDF ah: Qoob ka ciyaarka ah ee nafta
November 25-, 2010 | Uu Kottke | Tags: Alternative, Blog, Work Peace, Caalamiyeynta, Cad, Xuquuqda Aadanaha, anshaxa cusub, Philosophy, Qoob ka mid ah nafta, Deegaanka, Future.
The 4. Revolution – korontada goboleedka…
Waxaan ahaa mar kale shaneemo oo daawaday filim, ayaa igu dhiirrigeliyey in aan qabaa: “Tamarta Lacag La'aanta ah ee dhan! The 4. Revolution – Energy Autonomy”. Ka dib markii ay 4 sano oo shaqo ah, filimka waxaa soo saaray, aragtida bulsho, sahayda tamarta, samayn nadiif ah oo baahsan, xor ka ah qiiqa waxyeello, iyo wax saamayn ah ku nin iyo deegaanka, free ka helmaamay, Kooxaha iyo ololaynaysa, free ka xiran siyaasadda iyo yaraanta khayraadka, la heli karo lana awoodi karo oo dhan.
Waxaan Sein: gudbida 100% Tamarta la cusboonaysiin karo gudahood xiga 30 Years waa suurto gal. Filimkan Behind yahay oo dhan EnergyAutonomy-Community. Waxa kale oo aad ka badan oo ku saabsan xidhiidhka ka baran karaan, sida loo sameeyo filimada tan dugsiyada iyo macluumaadka la bixiyey macalimiinta in ay kala soo bixi (ama si fudud halkan).
Ka dib markii Revolution warshadaha, beeraha- iyo kacaanka macluumaad hadda siiyo 4. – kacaanka sahayda tamarta.
Laakiin ku filan oo hordhac ah, Halkan ka movie aragti yar:
Wali waxaa si buuxda Revolution Macluumaadka, kacaanka ee Internet-ka. Intee jeer baan ku riyoon jiray, in ay u diraan kuwa kuwaas oo fursado cusub aqoonta kala iibsiga iyo, Ma aha in ay tahay dhaqaale si ay u, Ayaa koronto la'aan, telefoonka jirin iska daa laptop ah. Waxbarashada waxay ka dhigan tahay madax-bannaanida, sameeyey degaa suurto gal dimuqraadi. Iyo waxbarashada ayaa sidoo kale u oggolaanaysa in ismaamul, suuragalnimada, fiican si aad u ogaato habka Adduun iyo inay ka sameeyaan naftooda.
Sidoo kale nala, waxaynu ahaan lahayn kuwa waxbarashada wanaagsan oo guud ahaan dadweynaha weli fog. Laakiin ugu yaraan aasaaska lagu dhigay, waana inaan noocyada tamarta, si ay u helaan. "Wadaag – waa u xoogga Soviet oo lagu daray electrification waddanka oo dhan…”, waxay ahayd war fiican u yaqaan of Lenin. Markaasuu, Wadaag ayaa ka dhacay la socodka iyo awood Soviet aysan mar kale xitaa waa. Laakiin dhibaatada aasaas u ah xal wax ku ool ah dhibaatooyinka ayaa la aqoonsaday: dhibaatada tamarta.
Waxa aanu sii wadi maanta ilaha tamarta lafo: Dhuxul, Oil, Career. Waa in koobnayn iyo isticmaalka saameynta uu ku leeyahay deegaanka. Sidaas waxa muujiyay si cad in filimka. Waa, helitaanka badan si ay tamarta la cusboonaysiin karo – iyo tani waa suurto gal in muddo gaaban, bandhigyada filimka. Kaliya waxa ay ku saabsan tahay in ay ka gudbaan resistances ee ka jirta shaqeeya tamarta – hal gacan siyaasad ahaan dhanka kale, laakiin sidoo kale ku jira dabeecadaha u gaar ah si ay u foomamka jira tamar. Qubo A kama dambaysta ah ee qashinka nukliyeerka iyo CO2 u tobankii aan la aqbali karin u mustaqbalkeena. Sabab kale oo sababta inuu ku biiro tamarta la cusboonaysiin karo waa unabwindbar…
By habka ugu: Waan u tilmaami nukliyeerka aan ka!
15-ka May, 2010 | Uu Kottke | Tags: 4. Revolution, Autonomy, Sahayda Energy, Deegaanka, Future.
Jakob von Uexküll: Fikradaha ku saabsan mustaqbalka…
Jakob von Uexküll (* 19. August 1944 ee Uppsala) waa Berufsphilatelist ah Swedish-German, Writer, Founder des “Award-nololeedka Right” (Award-nololeedka Right, Bilaabaha des World Future Council (World Future Council), Co-aasaha shirkii kale World Economic (1984) oo ah aasaasaha Renaissance Award Istooniyaan ah (1993).
Sanadihii 2007 den er gründete World Future Council (World Future Council). Tani waxay ka kooban tahay masuul ka, fikirka iyo jilitaanka waara oo ku hadlaya magaca jiilalka mustaqbalka. Golaha aqoonsaday isticmaalaya network ay aqoonyahaniinta, Xildhibaano iyo siyaasadaha hormuudka ururada deegaanka adduunka oo dhan oo kor ay fulinta ee caalamiga ah, heer qaran iyo heer gobol.
Halkan wareysi aad u xiiso badan isaga la (Riix sawirka!):
Tixgelin waxaa xusid mudan mustaqbalka!
2006 uu helay qiimaha badan oo qabanaya ee dabiiciga ah- iyo ilaalinta deegaanka
2008 Fromm Erich Prize
2009 Order of Merit waxaan. Class
April 20, 2010 | Uu Kottke | Tags: Horumarinta, Jakob von Uexküll, Cimilada, Deegaanka, Dhibaatooyinka Adduunka, Future.
Wed Jul 17th 2:44:07 UTC 2019